အင်တာဗျူးး Archives - Kachinland News
အင်တာဗျူးး April 25, 2018April 29, 2018 KLN0Comments
KLN – မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ဧပြီလ(၁၁)ရက်နေ့ကစပြီး ကချင်ပြည်အနောက်ဖက်ခြမ်း ဒေသကို အပြင်းအထန်တိုက်စစ်ဆင်လာခဲ့တယ် ။ ဘာကြောင့်ယခုလိုတိုက်စစ်ဆင်ာခဲ့တယ်လို့ထင်ပါသလဲ? ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူး – မြန်မာစစ်တပ်ကနေအပြင်းအထန်တိုက်စစ်ဆင်လာခြင်းဟာ- ၁။ နယ်မြေစိုးမိုးရေး -အခုသူတို့တိုက်စစ်ဆင်နေတဲ့ တပ်မဟာ(၂)ဌာနချုပ်နယ်မြေ၊ တပ်ရင်းအမှတ်(၁၄)နဲ့(၁၁) နယ်မြေ တွေဟာ ဆိုရင်တရုတ် OBOR လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နဲ့လုပ်ငန်းပူးတွဲလုပ်ဖို့ဒီနယ်မြေတွေကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ၂။ ကေအိုင်အိုရဲ့ ငွေရပေါက်တွေကိုသူတုို့ပိတ်ချင်တယ်။ ၃။ ကေအိုင်အို ကိုထောက်ခံပြီး ကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ပြည်သူလူထုကို ခွဲထုတ်ချင်တယ်။ ဒီ(၃)ချက်ကတော့အဓိကအချက်တွေဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ KLN – အခုအချိန်မှာ တပ်မဟာ(၂)နယ်မြေ၊ အောက်လောက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာဖြစ်နေတဲ့ စစ်ရေးအခြေအနေနဲ့ စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ ကျေးရွာနေပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ? ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူ – တပ်မဟာ(၂)အောင်လောက်နယ်မြေရဲ့အခြေအနေက- ဆက်လက်ပြီး စစ်ရေးပြင်းထန်နေဦးမယ့်အခြေအနေပါ။ မြန်မာစစ်တပ်ဖက်ကလှုပ်ရှားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကေအိုင်အေ ဖက်ကလှုပ်ရှားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တိုက်ပွဲတွေကအချိန်ပြည့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ စစ်မြေပြင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ကျေးရွာနေပြည်သူလူထု(၂၀၀၀)ကျော်စစ်ဘေးရှောင်ရင်းဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေပါတယ်။ တစ်ချို့ကတနိုင်းမြို့ဖက်မှာ ပိတ်မိနေပါပြီး၊ တစ်ချို့ကတောထဲမှာ ပိတ်မိနေတယ်။ မြန်မာအစိုးရနဲ့စစ်တပ် က […]
အင်တာဗျူးး December 15, 2016January 11, 2017 Nmang Gam0Comments
As fighting raged between northern-allied troops (NA-B) and the Burmese army in northern Shan State, about 70 Mongkoe residents were taken hostage on Nov 19, 2016, and taken to the army’s Byuha Hill (tactical command post).Most of the hostages were Lisu who live around the army base. Initially, over 100 civilians, includinganewly-wed couple […]
အင်တာဗျူးး July 15, 2015January 11, 2017 Pangmu Shayi0Comments
Given that Kachin societal relationships are governed by kinship ties, what is your family connection to the late Kachin Independence Organization (KIO) Chairman? My mother and the late Chairman were first cousins, her mother and his father being siblings. I spent my first three years of schooling at the Kachin Baptist High School at Myitkyina, […]
အင်တာဗျူးး April 24, 2015January 11, 2017 Pangmu Shayi0Comments
KLN’s Pangmu Shayi conductedawritten interview with Z. Brang Seng, of Murrieta, California, who has the distinction of being the first Kachin to receive immigrant status in the US. Pangmu Shayi: Could you tell us something about your family background? Z. Brang Seng: I was born in Namkham, Northern Shan State, on […]